Mooshinku wuxuu ku siinayaa suurtagalnimada inaad ku abuurtid fiidiyowyo dhaqdhaqaaq joogsi leh Androidkaaga Abuurista khadka tooska ah
Farsamada animation dhaqdhaqaaqa joojinta ayaa noo ogolaatay ka hor filimada xiisaha leh in badankood lagu sameeyay balastin. Waxaan ka hadli karnaa Habeenkii ka hor Kirismaska ​​ama Caroline oo ah labo si dhakhso leh kuu xusuusin doonta farsamada dhaqdhaqaaqa joojinta ee ku saleysan qabashada sawirada wali ka dibna isku xigxigta iyo abuurista animation.
Maantana haysano aaladahaas mobilada ah oo ku hubaysan kamarad weyn oo gadaal ah, waxaan gacanta ku haynaa a qalab weyn si loo abuuro fiidiyowyo ama joojiso gaabinta dhaqdhaqaaqa. Waxa kaliya ee haddii aan haysanno barnaamij sida Mooshinka ah, wax walba way sahlanaan doonaan, maaddaama codsigan uu diiradda saarayo fududeynta shaqada isticmaalaha si ay diiradda u saaraan qabashada sawirrada ay markaas mas'uul uga noqon doonaan ka shaqeynta sameynta fiidiyowga.
App waa aasaasiga ah quruxsan, laakiin waxay leedahay dhinacyo aad muhiim u ah si loo helo natiijooyin wanaagsan. Markaad sawirada qaadaneyso, waxay leedahay saacad si sawirada loo qaado si aan diirada u saarno inaan shayga dhaqaajino oo animation-ka ugu dambeeya la abuuri karo.
Marka dhammaan qabashada la qaado, waan awoodnaa heerka jir dhigay ilaa 30 FPS ama u ciyaar fiidiyowga howsha ugu dambeysa. Markaad duubeysid wali sawirada, ilaa aad kaqabsatid wax kabadan 24 ilbidhiqsi kasta, waxaa muhiim ah inaad dhigto FPS 12, maxaa yeelay dhowr sawir waxaad awood uheli doontaa inaad sameysato fiidiyoow sifiican ama kadhiman udhacaya.
Markaad dhamayso, intaas uun bay noqonaysaa waxaad ku keydisaa gudaha, taas oo ogeysiin u muuqan doonta oo muujinaysa baarka horumarka. Runtu waxay tahay in Mooshinku yahay barnaamij aad u xiiso badan oo laga heli karo Android bilaash taasna waxay ku timaaddaa mid ku habboon fiidiyowyo gaar ah oo aan dooneyno inaan kula yaabno asxaabta iyo qoyska.
Ku soo dejiso Mooshinka Android.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Abuur fiidiyowyada joogsiga dhaqso leh barnaamijka Mooshinka